Direct Square kuna Square Pipe Mill - China Shijiazhuang Zhongtai Pipe
Zvinonzi zvakananga vagokungurusa simbi ubvise uye mukotamise kuti Square & rectangular chimiro, ipapo weld kuti tipedze paumbwe.
1) Enzanisa pamwe kumativi kupinda mativi & rectangle Anoumba nzira, izvi nenzira iri nani pezvakaita kumucheto muchinjikwa chikamu, vanganzi, Semi-dhayamita womukati chinhu chakakombama riri Small, uye muromo yakati sandara, nemaonero nguva dzose.
2) The mutsetse wose mutoro yakaderera, kunyanya sizing nhengo.
3) The upamhi simbi ubvise iri diki anenge 2.4-3% pane kumativi kupinda sikweya & rectangle, rinogona kuponesa zvinodya pamusoro mbishi zvinhu.
4) It kuchinja multi-pfungwa vachipfugama nzira, kudzivisa axial simba uye divi abrasion, kuderedza aindiumba danho apo nechokwadi unhu, Zvichakadaro nayo kuderedza simba wastage uye chinotenderera abrasion.
5) It kuchinja kukabatanidzwa mhando chinotenderera pamusoro vazhinji pacho, zvinoita kuti munhu iine chinotenderera anogona kubereka dzakawanda mativi & rectangle mutopota nedzimwe Specification, izvozvo kuchiderera dura chinotenderera, pasi mutengo vanenge 80% pamusoro chinotenderera, kutsanyisa bankroll turnover, pfupi nguva imwe itsva chigadzirwa magadzirirwo.
Speed ​​(m / Maminitsi)
Previous: High nokukurumidza Pipe Mill
kwakakurudzira Pipe Mill
Zvakanaka hf Tube Mill
High nemazvo Tube Mill
High nemazvo Welded Pipe Mill
Mugadziri Tube Mill
Pipe Uye Tube Mill
Pipe Mill MAUMBIRWO
Pipe Mill MAUMBIRWO Rollers
Square Pipe Kuita Machine
Square Steel Pipe Kuita Machine
Square Tube Ndakasarudza Machine
Steel Square Pipe Kuita Machine
Straight musono Tube Mill
Straight musono Welded Pipe Mill
sepombi Mill Factory Prices
Welded Pipe Cold Roll Vaimbove Mill